Izinkampani ezintathu eziqokelwe imiklomelo yeTechPoint Mira! | Martech Zone
Izinkampani ezintathu engiqondane nazo zikhethwe njengabazogcina sebengenile Imiklomelo ye-Indiana's Mira:
I-ExactTarget - ngokungangabazeki ngokukhula kwayo nobuholi obumnandi ukuthi le nkampani izoba ngumamukeli ofanele womklomelo. Kunezicucu zohlelo lwe-ExactTarget olumane luphambane nemithetho ye-physics yokuthi bangakhiqiza futhi bathumele ama-imeyili ngokushesha kangakanani. Ngiyithandile iminyaka emi-2 nengxenye engiyisebenzele i-ExactTarget!
NgoMsombuluko, ngikujabulele ukudlula ngizixoxele UScott Dorsey, uMongameli we-ExactTarget, futhi kwaba sengathi angikaze ngihambe. Wayenamandla, enethemba, futhi emamatheka njalo. Ukuthi uthathe isikhathi sokungibona kungubufakazi obunjalo bokuthi ungumngane nomeluleki omuhle kangakanani.
Ngesikhundla sami esisha ePatronpath, ngisaqala ukusebenza ne-ExactTarget kancane. Uma sesikhule ngokugcwele nelinye lamakhasimende ethu, sizoba ne-akhawunti enkulu kakhulu ye-ExactTarget Enterprise esebenzayo. Kuleyo akhawunti, i-ExactTarget isenzele umbiko wangokwezifiso ukuze sikwazi ukuthumela ama-imeyili egameni labamele insimu futhi sinikeze abamele umbiko wokuthi izintshisekelo zamakhasimende abo zazincike ekuchofozeni kwabo.
Kuhle ukuba nabalingani beqembu elidala ku-ExactTarget futhi, ngoba bayayamukela impendulo yami. Ukuba ngumphathi womkhiqizo lapho bese ubuyela emuva endimeni yekhasimende kuyinto ebaluleke kakhulu. (Ngifisa sengathi bengingakwazi ukuthenga izinketho zami ngaphambi kokuba ngizilahle!)
Sine-akhawunti ye-Agency ne-ExactTarget futhi sinokuhlanganiswa okunamandla, okuzenzakalelayo kwezindawo zokudlela. Ngobusuku bonke, ngaphandle kokuxhumana okuvela endaweni yokudlela sithumela noma yimiphi imikhankaso eyishumi noma ngaphezulu - usuku lokuzalwa, isikhumbuzo, akukho ukuxhumana kwezinsuku ze-X, ukuthenga okungaphezulu kwama-dollar ayi-X, njll. Kuyindlela enhle yokugcina izindawo zokudlela.
Futhi, ngisebenza neKomidi leSuper Bowl lika-2012, ngakha i- I-plugin ye-WordPress ngokubhaliselwe okuzenzakalelayo okuvela kubhulogi le-WordPress nge-ExactTarget. Cishe kuphele ngama-80% njengamanje - ngisebenza nje ukuzama ukwenza i-automate the cron sebenzisa.
I-Blogware yokuhlanganisa - Ngenkathi uChris Baggott esese-ExactTarget, saqala ukubona ithuba lokufaka izicelo zokubloga ukuthi zikusebenzise ngempela okuqukethwe futhi zinikeze nokukhomba okungcono kakhulu kwe-Search Engine Optimization.
Njengoba indodana yami iqala e-IUPUI, angikwazanga ukuzibeka engcupheni yokweqa ebhodini iCompendium lapho uChris ebuza. Kungenzeka kube enye yamaphutha ami amakhulu. Ngomsindo omkhulu ngisho nomhawu omncane, bekufanele ngihlale phansi ngibukele uChris no-Ali Sales bethatha iCompendium ukuyimaketha! Qaphela: U-Ali Sales ubuye waba nesandla emlandweni wokuqalisa we-ExactTarget noChaCha… UChaCha naye uqokiwe!
Ngiyaziqhenya ngempela ngokuba kuleyo mihlangano yokuqala yangoMgqibelo i-Starbucks lapho sithuthukise khona icala lebhizinisi, noma kunjalo!
Nayi ingxoxo yokuqala ye- UChris ukhuluma ngeCompendium:
I-Compendium yenza umzuliswano wesibili wezimali manje futhi ikhula ngokushesha okukhulu. Inhlanganisela Yezinjini Zokucinga nokusebenza kahle kokwenza inqubo yezinkampani ezisebenzisa ukubhuloga kuyashisa njengamanje kanti iCompendium ihamba phambili. Ngama noChris emasontweni ambalwa edlule ngamphonsela imibono embalwa ngomkhiqizo wakhe.
UChris ube ngumeluleki omkhulu kimi futhi u-Ali ubenguMongameli okhuthazayo… basebenzise eyami inguqulo ye-Agency engizoyethula kungekudala. Uma unentshisekelo ku-Compendium, ngicela uxhumane nami ngqo futhi ngingakwazisa, “Kungani ungasebenzisi nje i- [Blogger, WordPress, Typepad, njll.]. Noma unga bhalisela i-Compendium's Newsletter (kodwa qiniseka ukungifaka kusethenjwa!) bese uzuza i-iPod Touch yamahhala.
I-Patronpath - Ukumaketha kanye ne-Ecommerce yeMboni Yokudlela - okokugcina umqashi wami wamanje. I-Patronpath ibhekene nokukhula kwamadijithi amathathu okwamanje. Njengoba izindawo zokudlela zidinga ukukhama izikhwama zazo zemali ngenxa yamanani anyukile nokwehliswa kwezinombolo zokudla, okuwukuphela kwendlela yokukhulisa ibhizinisi labo ukuthola ibhizinisi elinamandla lokukhipha noma lokuletha.
Uku-oda ku-inthanethi sekukhule amanye amakhasimende ethu avele aphume kokubomvu aye kokumnyama. Yize umnyombo wethu, sinaka kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi amaklayenti ethu asebenzisa ukwenziwa okuhle kwezinjini zokusesha nokuthuthuka okuhle kwesiza. Akwanele uku-oda online, kufanele uthole uku-oda online - iphuzu iningi lomncintiswano wethu eligeje ngalo.
Ezinyangeni eziyi-8 ezedlule sihlanganise amasistimu ama-POS ahlukene ama-4, ukuhlanganiswa okuqinile kwe-callcenter, sakha kabusha isikhombimsebenzisi sethu ukunciphisa amazinga okushiya futhi sasebenzisa incwajana ye-imeyili kazwelonke ye-turnkey yomunye wozakwethu (okukhulunywe ngaye ngenhla ekusebenzeni kwethu kwe-ExactTarget Enterprise). Komunye umbukiso wemisipha yethu, uchungechunge olukhulu lucele isici sohlelo lwethu esilusebenzise ngempelasonto eyodwa. Leso sici sithathe izinyanga zomncintiswano ukuthuthuka. Sinokuningi kakhulu entuthukweni njengamanje futhi sesingena ku-2008 nemigqomo ivutha bhe!
I-Patronpath ikhula ngolaka futhi ngicindezela ngamandla i-automation futhi (kungekudala ngizoba) ngisebenzisa isimo semvelo eyenziwe ngobuciko eBluelock ukuqhubeka. Sinozakwethu wokuthuthukisa i-ace osebenzise ezinye zezinkampani ezinkulu ze-ecommerce emhlabeni (emhlabeni jikelele) futhi ngiyaqiniseka ukuthi ngo-2009, sizoba yingxenye enkulu embonini. Iqiniso ukuthi siyazi ukuthi ukumaketha kusebenza kanjani, ukuthi i-ecommerce isebenza kanjani, nokuthi izindawo zokudlela zisebenza kanjani - futhi umncintiswano awusebenzi.
Sisanda kufaka iMarty Bird kulengxube. Ngicabanga ukuthi uMarty wakhipha umthwalo wami ongu-60% kimi ngosuku angena ngalo emnyango futhi kube yintokozo enkulu ukusebenza naye. Umdlandla wakhe oqhubekayo wokwenza ngcono namasu yilokho kanye esikudingayo kuleli phuzu ePatronpath!
Qaphela: Ziba ifayela le- I-Patronpath isayithi - sithole entsha eza kule nyanga!
Kumele ngengeze ukuthi angisiye kuphela ukuxhumana phakathi kwalezi zinkampani ezintathu. Uzobona ukuthi inkampani ngayinye inayo Ukubeka uphawu okuhlukile - sibonga uKristian Andersen neqembu. UKristian ungumfana omangalisayo futhi usebenzisa inkampani enhle ekwaziyo ukwenza njenganoma iyiphi enye i-ejensi noma ukubonisana engake ngasebenza naye. UKristian usiza izinkampani ezincane ukuba zikhulu, futhi uqoqe iqembu eliyisimanga lapha endaweni elizokwenza. Ungumngani omuhle futhi.
Tags: ukumakethainhlangano yezentengisoukukhangisa kwe-facebooklas vegasi-miloingqungquthela onlineucwaningo lwe-pewizinqumoindiana encaneukuqala ngempelasontoabenzi bezobuchwephesheumsebenzi
Shicilela Okuphakelwa Kwangaphandle Kusayithi Lakho Le-WordPress